Home Wararka Dibada Haweeneydan ayaa horey u ahaan jirtay macalin, waxayna ka dib ku biirtay...
Haweenay u dhalatay dalka Maraykanka ayaa qiratay inay hogaamineysay koox dumar ah oo ka tirsanayd kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka ee ka dagaalanta dalka Suuriya, iyo sidoo kale qorshaynta weeraro laga geysto gudaha dhulka Maraykanka.
Alison Fluke-Eckern, oo 42 jir ah, ayaa lagu eedeeyay in ay u tababaraysay carruur da’doodu ka yar tahay 6 sano jir sida loo adeegsado qoryaha darandooriga u dhaca iyo “jihaadka gacan ka hadalka ku dhisan” Carruurta ay ku tabarari jirtay gudaha Siiriya.
Haweeneydan ayaa horey u ahaan jirtay macalin, waxayna ka dib ku biirtay kooxda la baxday Dowladda Islamka oo ay noqtay hogaamiyaha guutada haweenka ee kooxdaas. Hooyadan ayaa dib ugu noqotay Mareykanka 2011-kii si ay u hoggaamiso guutada kooxda Dowladda Islaamka ee Mareykanka. Waxay haweeneydan horey ula shaqeysay koox xagjir ah oo ka howlgasha Liibiya kahor inta aysan u guurin Siiriya.
Bisha Oktoobar ayay maxkamad ku taalla Mareykanka ku xukuntay 20 sanno oo xabsi ah, iyada oo aan weli qirin dembiga ay ku heshay maxkamadda.
Intii ay ka tirsanayd ururka hubeysan ee Dowladda Islaamka, waxay hogaamineysay guutada loo yaqaan Khatiba Nusaybah oo dumar keliya ahaa, waxaana saldhig u ahaa magaalada Raqqa, ee dalka Suuriya.
Si kastaba, maxkamad ku taal Virginia ayay Talaadadii ka hor qiratay inay tababaraysay kooxdaas dhammaan dumarka ahaa, laakiin waxay sheegtay inaysan waligeed isku dayin inay carruur qorato.
“Annaga si ula kac ah uma aan tababarin hablaha yaryar,” ayay u sheegtay warbaahinta CNN. Qaar ka mid ah haweenka ay tababartay ayaa la filayaa inay ku marag furaan dhageysiga xukunka.
Fluke-Ekren, oo loo yaqaanay Ummu Muxammed al-Amriki, ayaa sidoo kale ku noolayd magaalada Mosul ee dalka Ciraaq, ka dib markii ay qabsadeen dagaalyahannada Dowladda Islaamka.
Alison Fluke-Eckern, ayaa markii ay ku biirtay ururkaas waxay bilowday in ay tababar siiso haweenka iyo gabdhaha iyada oo u tababaraysay sida loo adeegsado qoriga loo yaqaano AK-47, qarxinta bambooyinka iyo sida loo adeegsado suumanka qarxa.
Mid ka mid ah goobjoogayaasha ayaa sheegay inay arkeen mid ka mid ah carruurta Ekren, oo markaas da’deedu ahayd shan ama lix jir, oo qori nooca darandooriga u dhaca ku dhex haysata hoygeeda oo ku yaalla dalka Suuriya.
Waxa ay sidoo kale qiratay in ay ka mid ahayd dadkii qorsheeynayay inay weerarro lagu qaado dhulka Mareykanka, oo ay ku jiraan jaamacado iyo goobo laga dukaamaysto.
Dukumentiyada ayaa sidoo kale muujinaya in ninkeedii labaad uu xubin ka ahaa Ansar Al-Shareeca, oo ah ururkii weeraray xarun Maraykan ah oo ku taal Benghazi, Libya, sannadkii 2012-kii.
Iyada iyo seygeedii oo markii dambe lagu dilay duqeyn cirka ah, ayaa warbixin u diyaariyay hoggaanka kooxda kadib markii ay falanqeeyeen dukumeentiyada Mareykanka ee laga soo qaatay weerarkii Benghazi.
Larry Miller, oo ahaa macalinkii cilmiga seyniska u dhigay Eckern gobolka, Kansas 1990-meeyadii, ayaa BBC u sheegaay inuu gabi ahaanba la yaabay warka ku saabsan xiriirka ay la leedahay kooxda la baxday Dawladda Islaamka.
Waxaa uu ku xusuustaa in ay ahayd arday aad u fahma badan markii ay iskuulka dhigan jirtay.
“Waxay ahayd arday aad iyo aad u wanaagsan, waxay ahayd qof caqli badan oo kaftan badan,” ayuu yiri.
“Weligay ma aysan samayn wax muujinaya inay doonayso inay waxyeello u geysato qof kale oo bina’aadam ah,” ayuu intaa ku daray.
Waxa uu yiri, isaga oo dib u milicsanaya mar ay dalxiis aadeen islamarkana ay gacanta ku qaaday qorrato , iyada oo si taxadar leh u haysa si ardayda kale ay u daraaseeyaan. “Ma fahmi karo sida qof jecel waxyaabaha dabiiciga ah iyo dadku uu sidaas u samayn lahaa.”
Tobaneeyo sano ka dib, si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu eedeeyay in ay noqotay qof si dhab ah u raacda fikradaha xagjirka ah ee ay taageerto kooxda Dowladda Islaamka.
Mid ka mid ah marqaatiyada ayaa maxkamadda federaalka ee Mareykanka u sheegay in heerka xagjinamadeeda uu si aad ah u sareeyo.
Previous articleKulan lagu qiimaynayay waddooyinka laamida ah ee ay dowladda federaalku ka waddo Deegaanka Soomaalida ayaa lagu Jigjiga qabtay
Next articleShirkadda Apple oo ay saameyn doonto sharci ay midowga Yurub soo saareen